မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး ဆယ်လီ လူပျိုသိုးကြီး(၆) ယောက် - Myannewsmedia
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အမျိုးသားဆယ်လီတွေထဲကမှ အခုထိ အစွံ့မထုတ် ရသေးတဲ့ အမျိုးသားဆယ်လီ လူပျိုကြီးတွေ အများကြီးကျန်နေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအထဲကမှ အမျိုးသမီးထုကြားမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ Single သက်တမ်း ကြာ မြင့် နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဆယ်လီ လူပျိုသိုးကြီးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။သူတို့ တွေကတော့….
Image – Yan Aung ‘s fb
နံပါတ်တစ်နေရာမှာ ရွေးပေးချင်တဲ့ ဆယ်လီ လူပျိုကြီးကတော့ ကိုရန်လေး လို့ အားလုံးက ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ မင်းသား ရန် အောင်ပါ။အကယ်ဒီမီဆုတွေ အများကြီးရထားသူမို့ အကယ်ဒမီများရှင် ကိုရန်လေး ဆိုပြီး တော့လည်း ပရိသတ် တွေ က ခေါ်ကြပါတယ်။ကိုရန်လေးကတော့ သူ့ခေတ်သူ့အခါတုန်းက မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ သဲသဲ လှုပ် ၀န်းရံ အားပေးမှုကို ရခဲ့သူပါ။မယ်သီတာလို မိန်းကလေး၊ပုဂံမှာသာတဲ့လ၊အလင်းဖျော့ကောင်းကင်၊ကြာတော့ သည်လည်း မောင့်စကား…ကိုရန်လေးရဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေက တော့ အများကြီးပါ။အခုထိလည်း ပရိသတ်ရဲ့ ချစ်ခင်အားပေး မှုကို ရထားတဲ့ လူပျိုကြီးပါ။ငယ်ငယ်က လည်း ငယ် ဂုဏ် လေးနဲ့ ချောတဲ့ ကိုရန်လေးက အခုအချိန်မှာလည်း တည်ငြိ မ်တဲ့ Gentleman တစ်ယောက် အဖြစ် နဲ့ မိန်း ကလေး ပရိသတ်ရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရ နေတုန်းပါ။(၁၉၆၆)ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၁၄)မှာ မွေးတဲ့ အသက် (၅၂)နှ စ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဆယ်လီ လူပျိုကြီးပါ။
Image from Khant Si Thu’s fb
နောက်ထပ်ရွေးပေးချင်တဲ့ အနုပညာရှင် ဆယ်လီ လူပျိုကြီးကတော့ ကိုခန့်စည်သူပါ။အားလုံးက ကိုခန့်ဆိုပြီး ချစ်စနိုး နဲ့ ခေါ်ကြတဲ့ ဆယ်လီလူပျိုကြီးပါ။အနုပညာလောကမှာ အချစ်ရေးအရှုပ်အရှင်းကိစ္စမရှိသလောက် နည်းတဲ့လူပျိုကြီးပါ။ကု သိုလ် ရေးတွေ လုပ်ရင်းနဲ့ Single ဘ၀မှာ ပျော်မွေ့နေတဲ့ လူပျိုကြီးပါ။ကုသိုလ် ရေးတွေ လုပ် ရင်းနဲ့ ပဲ လူ ပျိုကြီး ဘ၀နဲ့ အရိုးထုတ်သွားမလားဆိုတာကို အားလုံးက သိချင်နေကြပါတယ်။
Image from Wai Lu Kyaw Foundation’s fb
နောက်ထပ် အနုပညာရှင် လူပျိုကြီးကတော့ ပရဟိတ မင်းသားဆိုပြီး အားလုံးက ခေါ်ကြတဲ့ ကိုဝေဠုကျော် ပါ။ ကား ရိုက် တွေနဲ့ အနုပညာအလုပ်ထက် ပရဟိတ အလုပ်တွေကို ပိုပြီး ဦးစား ပေး ဆောင် ရွက် နေတာကို တွေ့ ရပါ တယ်။Wai Lu Kyaw Foundation ကိုလည်း ထူထောင်ထားပြီး နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ အကူအညီ လို အပ် နေသူ တွေကို ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးလံ ခေါင်ဖျားနေပါစေ သွားရောက် ကူညီပေး နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ပရဟိတ အလုပ် တွေ လုပ် ရင်းနဲ့ ပဲ လူ ပျိုကြီး ဘ၀နဲ့ အရိုးထုတ်သွားမလားဆိုတာကို အားလုံးက သိချင်နေကြပါတယ်။
Image From A Kyp Phyu’s fb
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ FA အမျိုးသားထုရဲ့ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ စာရေးဆရာ အကြည်တော်ပါ။ဆရာ့ ရဲ့ အချစ်နဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ခပ်ထေ့ထေ့ ဟာသ မြောက်အောင် သရော်ထားတဲ့ စာတွေက အရမ်းကို နာမည်ကြီး ပါတ ယ်။FA တို့ရဲ့ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးမို့ ဆရာ့ရဲ့ နောက်လိုက် နောက်ပါ FA တွေ ကတော့ ဆရာအကြည်တော် တစ်ေ ယာက် အိမ်ထောင်ကျသွားမှာကို စိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။ဟာသတွေနဲ့ စာပေတွေ ကြားမှာပဲ ပျော်မွေ့ရင်း တစ်သက် လုံး လူပျိုကြီးဘ၀နဲ့ အရိုးထုတ် ၊မထုတ်ကတော့……………စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
Image from Nay Toe’s fb
အမျိုးသမီးထုကြားမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဆယ်လီ လူပျိုကြီး နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် အက ယ်ဒမီ ကိုနေတိုးပါ။(၁၉၈၁)ခုနှစ် စက်တင်ဘာ (၉)ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားပြီး အသက်ကတော့ (၃၇)နှစ်ပါ။ရည်ရွယ်ထား သူ ရှိနေပါပြီလို့ အရင်တုန်းက အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။တည်ငြိမ်၊ချောမောပြီး ယောက်ကျားပီသတဲ့ စိတ် ဓါတ် ကြောင့် အမျိုးသမီးထုကြားမှာ အရမ်းကို ရေပန်းစားပါတယ်။အနုပညာလောကမှာလည်း အချစ်ရေး အရှုပ်အရှင်း ကိစ္စတွေ မရှိတဲ့ မင်းသားပါ။မိန်းကလေးတွေ လက်ထပ်ချင်တဲ့ Type မျိုး ဖြစ်တဲ့ လူပျိုကြီး နေတိုးကို ပိုင်ဆိုင် ခွင့် ရမယ့် အမျိုးသမီးက ဘယ်သူဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာကို ပရိသတ်တွေ က စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။
Image from Sai Sai Kham Leng ‘s fb
စိုင်းစိုင်းကတော့ ချစ်တဲ့ သူတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည် နေသူပါ။စိုင်းစိုင်းကနေ ဦးစိုင်းဖြစ်တဲ့ အထိ ပျိုပျို အိုအို အမျိုး သမီးေ တွရဲ့ အချစ်တွေ အများကြီးကို ရထားသူပါ။အချစ်တွေ များပြီးအခု ထိ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် သေချာ ပြစရာမရှိတဲ့ ဆယ်လီ လူပျိုကြီး လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။(၁၉၇၉)ခုနှစ် ဧပြီ (၁၀)ရက်မှာ မွေးတာမို့ အသက် (၄၀) ရှိနေပါပြီ။ စိုင်းစို င်းရဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း သူတို့ကသာ အိမ်ထောင်ပြုချင်ပြုမယ် စိုင်းစိုင်း ကိုတော့ တစ်သက်လုံး လူပျိုကြီးဘ၀နဲ့ပဲ အရိုးထုတ်စေချင်တဲ့ သူတွေက များနေပါတယ်။စိုင်းစိုင်းတစ်ယောက် အချစ်တွေ များလွန်းလို့ပဲ ရွေးရခက်နေတာလား (ဒါမှမဟုတ်) ရွေးလွန်း လို့ မရတာလား … ဆိုတာကို အားလုံးက သိချင်နေပါတယ်။ဥစ္စာပေါ၊ရုပ်ချော၊ သေ ဘာမနောကောင်းတဲ့ စိုင်းစိုင်းကိုရော ဘယ်လို ကံထူးရှင်လေးက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားမလဲ … ဆိုတာကတော့ စောင့် ကြည့် ရအုံးမှာပါ။
မွနျမာနိုငျငံမှာရှိတဲ့ အမြိုးသားဆယျလီတှထေဲကမှ အခုထိ အစှံ့မထုတျ ရသေးတဲ့ အမြိုးသားဆယျလီ လူပြိုကွီးတှေ အမြားကွီးကနျြနပေါသေးတယျ။အဲ့ဒီအထဲကမှ အမြိုးသမီးထုကွားမှာ နာမညျကွီးတဲ့ Single သကျတမျး ကွာ မွငျ့ နပွေီ ဖွဈတဲ့ ဆယျလီ လူပြိုသိုးကွီးတှကေို ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။သူတို့ တှကေတော့….
နံပါတျတဈနရောမှာ ရှေးပေးခငျြတဲ့ ဆယျလီ လူပြိုကွီးကတော့ ကိုရနျလေး လို့ အားလုံးက ခဈြစနိုးချေါကွတဲ့ မငျးသား ရနျ အောငျပါ။အကယျဒီမီဆုတှေ အမြားကွီးရထားသူမို့ အကယျဒမီမြားရှငျ ကိုရနျလေး ဆိုပွီး တော့လညျး ပရိသတျ တှေ က ချေါကွပါတယျ။ကိုရနျလေးကတော့ သူ့ခတျေသူ့အခါတုနျးက မိနျးကလေး ပရိသတျတှရေဲ့ သဲသဲ လှုပျ ဝနျးရံ အားပေးမှုကို ရခဲ့သူပါ။မယျသီတာလို မိနျးကလေး၊ပုဂံမှာသာတဲ့လ၊အလငျးဖြော့ကောငျးကငျ၊ကွာတော့ သညျလညျး မောငျ့စကား…ကိုရနျလေးရဲ့ ဇာတျကားကောငျးတှကေ တော့ အမြားကွီးပါ။အခုထိလညျး ပရိသတျရဲ့ ခဈြခငျအားပေး မှုကို ရထားတဲ့ လူပြိုကွီးပါ။ငယျငယျက လညျး ငယျ ဂုဏျ လေးနဲ့ ခြောတဲ့ ကိုရနျလေးက အခုအခြိနျမှာလညျး တညျငွိ မျတဲ့ Gentleman တဈယောကျ အဖွဈ နဲ့ မိနျး ကလေး ပရိသတျရဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို ရ နတေုနျးပါ။(၁၉၆၆)ခုနှဈ ဒီဇငျဘာ (၁၄)မှာ မှေးတဲ့ အသကျ (၅၂)နှ ဈရှိနပွေီဖွဈတဲ့ ဆယျလီ လူပြိုကွီးပါ။
နောကျထပျရှေးပေးခငျြတဲ့ အနုပညာရှငျ ဆယျလီ လူပြိုကွီးကတော့ ကိုခနျ့စညျသူပါ။အားလုံးက ကိုခနျ့ဆိုပွီး ခဈြစနိုး နဲ့ ချေါကွတဲ့ ဆယျလီလူပြိုကွီးပါ။အနုပညာလောကမှာ အခဈြရေးအရှုပျအရှငျးကိစ်စမရှိသလောကျ နညျးတဲ့လူပြိုကွီးပါ။ကု သိုလျ ရေးတှေ လုပျရငျးနဲ့ Single ဘဝမှာ ပြျောမှနေ့တေဲ့ လူပြိုကွီးပါ။ကုသိုလျ ရေးတှေ လုပျ ရငျးနဲ့ ပဲ လူ ပြိုကွီး ဘဝနဲ့ အရိုးထုတျသှားမလားဆိုတာကို အားလုံးက သိခငျြနကွေပါတယျ။
နောကျထပျ အနုပညာရှငျ လူပြိုကွီးကတော့ ပရဟိတ မငျးသားဆိုပွီး အားလုံးက ချေါကွတဲ့ ကိုဝဠေုကြျော ပါ။ ကား ရိုကျ တှနေဲ့ အနုပညာအလုပျထကျ ပရဟိတ အလုပျတှကေို ပိုပွီး ဦးစား ပေး ဆောငျ ရှကျ နတောကို တှေ့ ရပါ တယျ။Wai Lu Kyaw Foundation ကိုလညျး ထူထောငျထားပွီး နိုငျငံတဈဝနျးမှာရှိတဲ့ အကူအညီ လို အပျ နသေူ တှကေို ဘယျလောကျပဲ ဝေးလံ ခေါငျဖြားနပေါစေ သှားရောကျ ကူညီပေး နတောကို တှရေ့ပါတယျ။ပရဟိတ အလုပျ တှေ လုပျ ရငျးနဲ့ ပဲ လူ ပြိုကွီး ဘဝနဲ့ အရိုးထုတျသှားမလားဆိုတာကို အားလုံးက သိခငျြနကွေပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာရှိတဲ့ FA အမြိုးသားထုရဲ့ ဂိုဏျးခြုပျကွီး ဆိုပွီး နာမညျကွီးနတေဲ့ စာရေးဆရာ အကွညျတျောပါ။ဆရာ့ ရဲ့ အခဈြနဲ့ မိနျးကလေးတှကေို ခပျထထေ့ေ့ ဟာသ မွောကျအောငျ သရျောထားတဲ့ စာတှကေ အရမျးကို နာမညျကွီး ပါတ ယျ။FA တို့ရဲ့ ဂိုဏျးခြုပျကွီးမို့ ဆရာ့ရဲ့ နောကျလိုကျ နောကျပါ FA တှေ ကတော့ ဆရာအကွညျတျော တဈေ ယာကျ အိမျထောငျကသြှားမှာကို စိုးရိမျပူပနျနကွေပါတယျ။ဟာသတှနေဲ့ စာပတှေေ ကွားမှာပဲ ပြျောမှရေ့ငျး တဈသကျ လုံး လူပြိုကွီးဘဝနဲ့ အရိုးထုတျ ၊မထုတျကတော့……………စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
အမြိုးသမီးထုကွားမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ ဆယျလီ လူပြိုကွီး နောကျတဈယောကျကတော့ ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ အက ယျဒမီ ကိုနတေိုးပါ။(၁၉၈၁)ခုနှဈ စကျတငျဘာ (၉)ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားပွီး အသကျကတော့ (၃၇)နှဈပါ။ရညျရှယျထား သူ ရှိနပေါပွီလို့ အရငျတုနျးက အငျတာဗြူးတှမှော ဖွခေဲ့ဖူးပါတယျ။တညျငွိမျ၊ခြောမောပွီး ယောကျကြားပီသတဲ့ စိတျ ဓါတျ ကွောငျ့ အမြိုးသမီးထုကွားမှာ အရမျးကို ရပေနျးစားပါတယျ။အနုပညာလောကမှာလညျး အခဈြရေး အရှုပျအရှငျး ကိစ်စတှေ မရှိတဲ့ မငျးသားပါ။မိနျးကလေးတှေ လကျထပျခငျြတဲ့ Type မြိုး ဖွဈတဲ့ လူပြိုကွီး နတေိုးကို ပိုငျဆိုငျ ခှငျ့ ရမယျ့ အမြိုးသမီးက ဘယျသူဖွဈလာမလဲ ဆိုတာကို ပရိသတျတှေ က စိတျဝငျတစားစောငျ့ကွညျ့နကွေပါတယျ။
စိုငျးစိုငျးကတော့ ခဈြတဲ့ သူတှေ ဝိုငျးဝိုငျးလညျ နသေူပါ။စိုငျးစိုငျးကနေေ ဦးစိုငျးဖွဈတဲ့ အထိ ပြိုပြို အိုအို အမြိုး သမီးေ တှရဲ့ အခဈြတှေ အမြားကွီးကို ရထားသူပါ။အခဈြတှေ မြားပွီးအခု ထိ လကျဆုပျလကျကိုငျ သခြော ပွစရာမရှိတဲ့ ဆယျလီ လူပြိုကွီး လို့ ပွောလို့ရပါတယျ။(၁၉၇၉)ခုနှဈ ဧပွီ (၁၀)ရကျမှာ မှေးတာမို့ အသကျ (၄၀) ရှိနပေါပွီ။ စိုငျးစို ငျးရဲ့ ပရိသတျတှကေလညျး သူတို့ကသာ အိမျထောငျပွုခငျြပွုမယျ စိုငျးစိုငျး ကိုတော့ တဈသကျလုံး လူပြိုကွီးဘဝနဲ့ပဲ အရိုးထုတျစခေငျြတဲ့ သူတှကေ မြားနပေါတယျ။စိုငျးစိုငျးတဈယောကျ အခဈြတှေ မြားလှနျးလို့ပဲ ရှေးရခကျနတောလား (ဒါမှမဟုတျ) ရှေးလှနျး လို့ မရတာလား … ဆိုတာကို အားလုံးက သိခငျြနပေါတယျ။ဥစ်စာပေါ၊ရုပျခြော၊ သေ ဘာမနောကောငျးတဲ့ စိုငျးစိုငျးကိုရော ဘယျလို ကံထူးရှငျလေးက ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရသှားမလဲ … ဆိုတာကတော့ စောငျ့ ကွညျ့ ရအုံးမှာပါ။
Previous post ရွှေထူး လှတယ်ပြောတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီလေးတွေကို ဆိုးပြထားတဲ့ ရွှေမှုံရတီရဲ့ ဗီဒီယို
Next post ရေကူးကန်ထဲမှာ ဘီကီနီဝတ်စုံလေးနဲ့ ချစ်သူလေးရဲ့ ပါးပြင်ကို နူးညံ့ချိုသာလွန်းတဲ့ အနမ်းမိုးတွေ ရွာသွန်းပေးနေတဲ့ သင်ဇာလေး